Jeff Goldblum Te-hanao horonantsary 'manidina' hafa - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Jeff Goldblum Te-hanao horonantsary 'manidina' hafa
Jeff Goldblum Te-hanao horonantsary 'manidina' hafa
by Michael Carpenter Jona 17, 2018
by Michael Carpenter Jona 17, 2018 1,835 hevitra
Ny olona rehetra dia tia an'i Jeff Goldblum, ary maninona no tsy izy, angano izy. Malala noho ny fahaizany mihetsika sy ny fitiavany amin'ny ankapobeny, Goldblum dia mirehareha amin'ny asan'ny kariera, ao anatin'izany ny horonan-tsary miovaova toy ny Jurassic Park, Andron'ny fahaleovan-tena, ary Thor: Ragnarok.
Na izany aza, ho an'ireo mpankafy mampihoron-koditra, dia mety ho tsaroana tsara hatrany i Goldblum noho ny anjara asany tamin'ny famerenany David Cronenberg ilay famerenana tamin'ny 1986 Ilay lalitra. Manasongadina ny sasany amin'ireo effets manokana manokana azo ampiharina amin'ny tantara, The Fly manaporofo fa ny remakes indraindray afaka manjaka.
Ao anatin'io horonantsary io, Goldblum dia mazàna milalao siantista Seth Brundle, izay mamorona andiany pod teleportation izay toa lasa fandrosoana ara-tsiansa. Mampalahelo fa miafara amin'ny fampifangaroana ny ADN-ny amin'ny alàlan'ny lalitra tsy fantatra izy, ary mitarika fampihorohoroana ho an'ny olona rehetra tafiditra amin'izany.
raha Fly ny mpamorona vokany Chris Walas dia hitarika tohiny sahaza ny 1989 an'ny The Fly II, Goldblum dia nampahafantatra azy io nandritra ny resadresaka nifanaovana taminy Fangaroana ra fa aleony miseho amin'ny vaovao Fly fizaram-bola.
Raha mety tsy ho tafavoaka velona i Seth Brundle The Fly, Nilaza i Goldblum fa faly izy milalao havana Brundle tsy voatonona teo aloha. Raha dinihina ny haben'ny Goldblum tao The Fly, tsy isalasalana fa ireo mpankafy dia mampametra-panontaniana hoe inona no ilaina mba hamerenany azy amin'ny franchise.
Na izany aza, misy ny trondro. Ny antony lehibe tian'i Jeff Goldblum hiverina dia ny fotoana hiaraha-miasa amin'i Cronenberg indray, ary efa an-taonany maro i Cronenberg no nanao horonantsary mampihoron-koditra. Na izany aza, hevitra mahafinaritra be ny misaintsaina, ary afaka maniry isika hitranga.